तिथि मेरो पत्रु » अनलाइन डेटिङ तल तपाईं रही?
तपाईं बस कि सौवां अनुत्तरित ई-मेल पठाएका छन् जब यो छ कसरी थाहा, तपाईं बाहिर फर्केर गर्न कुराहरु थिए कि राम्रो मानिस / महिला विवाह गर्न, तपाईं साँच्चै मन परेको एक शब्द बिना गायब भएको छ र त्यो शरीरमा यो जस्तै केहि हेरेनन् किनभने तपाईं अन्तिम हप्ता संग भेट व्यक्ति कम्तीमा दस वर्ष पुरानो थियो कि एक तस्वीर पोस्ट हुनुपर्छ! यो राम्रो हतोत्साहित पार्ने हुन सक्छ.
यो तपाईं snobby हुन मतलब छैन, र सत्य यो तपाईं अनलाइन पूरा सबैलाई जस्तै महसुस गर्न सक्छन् या त खेल खेल छ, सेक्स खोजी, आफ्नो पूर्व बारेमा आफ्नो काँध मा एक चिप रिसाए, तिनीहरूलाई एक मोडेल जस्तै लाग्दैछ बनाउन एक कुरूप छडी र त्यसपछि फोटो-shopped उनको चित्र द्वारा मारा या उनि सिर्फ सादा पागल हो गरिएको छ! यो कटु सुनिन्छ भने यो मतलब छैन, र यो अनलाइन डेटिङ को संसारमा कहिलेकाहीं महसुस गर्न सक्छन् कसरी साँच्चै छ. तपाईं Jaded प्राप्त विशेष गरी भने! दुःखको कुरा यो सबै तपाईं थकित महसुस गर्न सक्छन्, निराश र बाहिर जलाइदिए. कुनै-कुनै अवस्थामा यो पनि तपाईं कसैले तपाईंलाई लागि वहाँ बाहिर छ कि प्रश्न गर्न सक्छ!
खराब स्थिति मा म पूर्ण तौलिया मा फेंक मानिसहरूलाई थाह छ, अनलाइन डेटिङ घोषणा काम गर्दैन, या यो सिर्फ weirdos लागि छ कि, या जो कथाको संस्करण तपाईं आफैलाई बताउन. हेर म एकपछि अर्को निराशा अनुभव गर्न देखिंदा यो खराब महसुस गर्दैन भन्दै होइन, तथापि के यहाँ सबै फर्क दृष्टिकोण एक सानो परिवर्तन गर्न सक्दैन – तपाईं अनलाइन डेटिङ हेर्न जो माध्यम लेंस सिर्फ एक सानो 'Tweak'.
के तपाईं यहाँ सम्झना छ अनलाइन डेटिङ आफ्नो 'लक्ष्य बजार' खुल छ, यो आफ्नो स्थानीय आसपास क्षेत्र देखि सिर्फ पुरुष र महिलाहरु बीच ठाउँ लिन प्रयोग डेटिङ गर्दा यो फिर्ता भएको थियो भन्दा धेरै ठूलो छ कि अर्थ. अनि यो तपाईं मान्छे को सबै विभिन्न प्रकार पूरा गर्न जाँदैछन्. ती सबै मानिसहरू आफ्नो दयालु हुन जाँदैछन् छैन, र तपाईं सधैं या त तिनीहरूको हुनेछैन. यो जुनसुकै हुन सक्छ तपाईं कसरी अद्भुत तपाईं र कति पकड को को तपाईं लागू हुन्छ. अनलाइन डेटिङ को दुनिया मा यो धेरै भिन्नता छैन, 'कुनै न कुनै र लडनु' को बस एक निश्चित राशि छ. अनि शायद तपाईं वास्तवमा 'एक' तिमीलाई भेट्न संभावना छ मान्छे को एक निश्चित 'मात्रा' पूरा अघि, (तपाईं धेरै भाग्यशाली हो जब सम्म). अनि एक व्यक्ति रद्दी अर्काको सम्पत्ति हो के छ सम्झना. हामी व्यक्तिगत सारा कुरा ले गर्दा समस्या आउँछ.
सम्झना गर्ने अन्य कुरा हो कि हामी पुरानो जमानाको बाटो केटासित गर्न प्रयोग गर्दा, अर्थात् बैठक मानिसहरूको सामना सामना, हामी सामान्यतया पहिलो तिनीहरूलाई बारेमा थोडा ठेगाना हुनेछ, यो मात्र थियो भने पनि तिनीहरूले वास्तवमा वास्तविक जीवन मा जस्तै लाग्दैछ. तर अनलाइन डेटिङ तपाईं छैन, तपाईं व्यक्ति तिनीहरूलाई भेट भए त तपाईं मिति गरेका छन् भनेर मानिसहरू धेरै भर आउन जाँदैछन्. तैपनि पढेर प्रोफाइल तपाईंलाई धेरै विचार दिन लाग्नुभएको छैन, पछि सबै किनभने, मानिसहरूले आफ्नो प्रोफाइल मा मात्र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो पक्ष प्रस्तुत. यो इमानदार हुन गरौं, यो कुनै लेख्न भनेर 'चिढिंने संभावना छ, दुर्गंध र अलिकति receding कपाल स्वार्थी narcissist 'उनको लागि आफ्नो रात्रिभोज कुक राम्रो स्त्री खोज्ने.
यसैले यो विपत्तिको जस्तै जोगिन रूचाउँछु कि तपाईं केही मानिसहरूको सामना गर्नेछ पाठ्यक्रम को लागि बराबर छ. अनि केही तपाईं बस चासो छैन. केही तपाईं मा रुचि हुनेछैन. केही गायब त चासो लाग्न र हुनेछ. यो सबै अभिन्न अङ्ग अनलाइन डेटिङ छ कि तपाईं स्वीकार गर्न सक्छन् भने तपाईं एक धेरै राम्रो किराया हुनेछ. तपाईं बस मुस्कान गर्न सक्छन् भनेर बाटो, आफैलाई हाँस्न र भन्न 'अर्को'. त्यसपछि सही फिर्ता घोडा मा प्राप्त.
निराश प्राप्त छैन. अनलाइन डेटिङ बारे मा आफ्नो दृष्टिकोण यस एक सानो Tweak बनाउन, र त्यसपछि त्यहाँ बाहिर प्राप्त र विभिन्न मान्छे धेरै अन्तरक्रिया केहि मजा. च्याट, flirt, केही तिथिहरु मा जाने, आनन्द, र जो थाह, सायद आफ्नो 'एक' बस अर्को कुना को आसपास छ.